Sidee loo abuuraa qaan-sheegasho qasabadaysan?
Waxaa jira fikrado khaldan oo badan oo ku jira warshad dhisme oo ah mid caadi u ah warshadaha suuq geynta. Ayadoon loo eegin sanado badan oo waayo-aragnimo ah ee aad ku leedahay qaabkan, marnaba ma ogaan kartid sida Google uu u aqbalayo goobtaada iyo waxa nidaamka raadinta ah uu sameyn doono daqiiqad xiga. Kaliya kormeerayaasha Google iyo webmaster-ka ayaa ogaan kara hubaal. Waa inaan isticmaalnaa xogta aan heysano iyo waayo-aragnimadayada si aan u saameyno qiimeynta goobta.
Waxaa jira hadalo badan oo caadi ah iyo fikrado cusub oo ku saabsan qormooyin qadaadiic ah iyo dhabarka dambe. Aan ka hadalno kuwa ugu caamsan iyaga:
"Xirfadaha" khadka tooska ah ma bixiyaan wax qiime ah
"Rel = nofollow" waa astaanta khaaska ah ee backlink kuwaas oo sheega bootooyinka aan raadineynin sida Xiriir oo ha ku dhaafin juice isku xiran iyaga oo loo marayo iyaga. Waxaa jira doodo badan oo ku saabsan qiimaha xiriirka nofollow. Qaar ka mid ah websaydaradu waxay sheeganayaan inaan loo baahnayn in la abuuro xiriirro noocaas ah, halka kuwo kalena ay ku doodaan in qiimaha dib u celinta dib loo qiimeeyo. Maskaxdayda, ma jiro jawaab cad oo su'aashan ah maxaa yeelay qiimaha ay ku xirnaan karto. Xirfadahan soo galaya ma qeybinayaan qaybo madax-bannaan. Tusaale ahaan, haddii aan bilowno website ah oo aan ku kobcineyno nambarada tayada "nofollow" ee tayada leh. Natiijo ahaan, ma arki doontid kor u kac ku yimaada tirakoobyada taraafikada. Waxaan u maleynayaa in Google uu sameeyo shaqo fiican oo faham ah "nofollow" xiriirka ku saabsan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la xuso meelaha qaarkood ee xiriiriyeyaasha nofollow inay saameyn weyn ku yeeshaan qiimeynta goobta iyo guud ahaan bogga internetka. Meelahaas waxaa ka mid ah bogag internet ah oo aad u fiicnaanaya, qaababka backlink kuwaas oo ay ku jiraan "nofollow" links iyo marka qoraalka qalabka ah in ka badan la-farsameeyey. Dhammaan goobaha soo socda waxay leeyihiin qaababka gadaal-gadaal ah. Waxaa sababi kara sababo kala duwan sida hawlaha spammy ama barnaamijyada xiriirka.
Anigu waxaan isticmaalay dhabarka nofollow ee farsamadayda, isku dayaya in aan ka helo ilaha webka tayo sare leh foomka blogka faallooyinka, xiriirka, meelaynta tifaftirka iyo farsamooyinka kale ee dhisida. Natiijo ahaan, waxaan ku guulaystay xiriir wanaagsan oo tayo leh "tag". "Xiriiriyeyaashani waxay keeneen in ka badan 100% korodhka darajooyinka muhiimka ah.
Taasi waa sababta aan u dhihi karo in backlinks nofollow ay keeni karaan qiime aad goobta. Si kastaba ha noqotee, waxay ku xirantahay sida loo helo. Qalabka tayada leh ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah wuxuu si fiican u shaqeynayaa sidii loo dheelitirnaan lahaa iskudhafidyada isku xirnaanta.
Tayo miyuu leeyahay?
Haddii aad i waydiisatay su'aashan kadib markii ugu dambeysay ee Google Penguin-ka ugu dambeysay, waxaan jeclaan lahaa inaan kuugu raaxeysano sida wakhtigaas oo dhan qof kasta oo kaliya wuxuu eegay xiriiriyeyaasha tayada ee tayada. Si kastaba ha noqotee, wakhti go'an, ayaa xoogga la saaray. Maanta, websiyo badan oo badan ayaa ka soo baxa ilaha websaydhka ah xitaa haddii ay leeyihiin xiriiryo tayo yar oo kaliya oo ay leeyihiin xiriiro badan oo spammy ah oo ka soo jeeda bogagga tixraaca. Taasina waa sababta bogagga leh qabasho badan oo laga yaabo in ay leeyihiin geeska kale oo leh xiriiro tayo leh oo kooban. Sanadihii hore, waxaan aragnaa isku xirnaan weyn oo leh tirada dhabarka, ma ahan kaliya tayada iyaga, taas oo saameyn ku yeelaneysa ciyaartoyda ugu weyn suuqa suuqa ee TOP.
Waxaa intaa dheer, waxaa dhici karta in uu u muuqdo mid la yaab leh, laakiin weli, xiriiro badan oo ka yimid isla domain ayaa kaa caawin kara, Google xitaa raalli ka ah. Khatar kuma gelineysid rigoorada, xittaa way ka faa'iideysan kartaa. Intaa waxaa dheer, wadarta guud ee dib-u-qabadka dibeddu waxay ku darsan kartaa dadaalkaaga SEO maadaama ay tahay isir-qiimeyn weyn oo isku-dhejis ah. Webmasters waxay sidoo kale wacdaa xidhiidhka dhismaha ee xidhiidhka "xawaaraha isku xira Source . "